Diyaarad Ay Leeyihiin Booliska Kenya Oo Burburtay. – Calamada.com
Diyaarad Ay Leeyihiin Booliska Kenya Oo Burburtay.
calamada August 16, 2018 2 min read
Wararka ka imaanayo wadanka Kenya ayaa sheegaya in diyaarad helicopter ah oo ay lahaayeen ciidanka police-ka Kenya ay ku burburtay dhulka howdka ah ee Boni ee hoos taga gobolka xeebta dhaca ee Lamu.
Diyaarada oo ay la socdeen laba Pilot iyo 5 askari oo police ah ayaa kusoo dhacday meel kudhow deegaanka Haluuqa, kadib marki mid kamid ah Matooradeeda uu ka ciladoobay.
Dowlada Kenya ilaa hada faahfaahin kama bixin khasaaraha ka dhashay shilka diyaaradan, goobta ay kusoo dhacdayna waxaa isku gadaamay ciidamo fara badan oo saxafiyiinta iyo dadka deegaankaba u diiday inay soo arkaan sida ay wax u dheceen.
Diyaarada ayaa la sheegay in xilliga ay soo dheceysay ay kuguda jirtay howlo basaasnimo oo ay ka waday dhulka howdka ah ee Boni, oo mujaahidiinta AlShabaab ay gabaad ka dhigtaan si ay weeraro uga fuliyaan deegaanada gobolka xeebta dhaca ee Lamu.
Burburka Helicopter-kan ayaa khasaaro weyn ku ah ciidanka police-ka Kenya, waxa ayna kamid ah ilaa 3 diyaarad oo dhawaan lagusoo dayactiray Jamhiiriyada Czech Republic, kuwaas oo ay ku baxday lacag gaareysa 1.5Billion oo lacagta Kenya ah.
Waxa ay kamid aheyd 2 diyaarad oo ciidanka Kenya ay u isticmaali jireen, kaalmeynta ciidankooda ku sugan gobolka Lamu iyo Gobolka NFD ee gumeysiga Kenya ku hoos jira, si ay ugusoo daabulaan dhaawacyada iyo dhimashada ka dhalato dagalka ay kula jiraan mujaahidiinta iyo inay u basaasaan xilliyada habeenki ah, goobaha looga shakisan yahay in Mujaahidintu ay ku sugan yihiin.
Xog la helay ayaa sheegaysa in police-ka Kenya uu la daala dhacayo dhibaatada ka heysato kaalma la,aanta dhanka hawada ah, xilliyada ay fulinayaan howl galada, maadaama aan laheyn diyaarado helicopero ah oo kala qeyb qaata, wixii ka danbeeyey marki ay ka burbureen 2 diyaarad oo helicopter ah intii lagu guda jiray sanadkii lasoo dhaafay ee 2017ka.
Previous: Foreign Policy: AMISOM dagaalka ayaa ku dheeraaday, welina lama diyaarin ciidamo Soomaali Ah Oo Buuxiya Booskooda (WARBIXIN)
Next: Halkan Ka Dhageyso Warka Duhurnimo 05-12-1439 Hijri.